प्रेम जीवनमा एकपटक हुन्छ, मैले तलाईं गरिसके
जानकारी गराउँ, यो मेरो मनको बह हो । भावानाहरु हुन् । कसैले पढिदिने र नपढिदिने कुराले त्यति अर्थ राख्दैन् । अर्थ चाहिँ यस कुराले राख्छ, जोप्रति यी भावानाहरु व्यक्त गरिरहेछु उसामु पुग्छ कि पुग्दैन ? चाहान्छु, त्यो सम्म पुगोस् । वास्तवमा यी सब कुराहरु फेरि लेखिरहनु भनेको बिमानस्थलमा बसेर पानीजहाजको प्रतीक्षा गर्नुु जस्तै हो । विल्कुलै अर्थहीन । तर पनि लेख्छु र भन्छु पनि ‘तलाईं माया गर्ने यो मन चाहेर पनि परिवर्तन भएन’।
आज म तलाई ‘तँ’भनेर सम्बोधन गर्छु है ? किनकी मलाई अझै याद छ, तलाई मैले तिमी, तपाईं भनेको मन पर्दैन नि है ? मलाई त्यो दिनको पनि याद छ, मैले तलाई झुक्किएर ‘तपाईं’भन्दा तँ मसँग ४ दिन नबोलेको ।
फेरि भनेर केहि फाईदा छैन् । त्यो थाहा छ । तर प्रेममा आशा नामको त्यान्द्रो कहिल्यै नचुटिने रहेछ । त्यसमा पनि सबै चिज प्यारा र खास लाग्ने रहेछन्, जहाँ तेरो नाम र तेरो याद आउँछ । त्यसैले फेरि केही लेख्ने चेष्टा गरे । इजाजत त नदेलिस् तर अर्कोपटक ‘सानी’सम्बोधन हत्याउन मन लागेको छ । कसैबाट खोस्न मन लागेको छ । त्यो भिडबाट थोरै पनि समय मिल्यो भने, मेरा यी भावानाहरु पूरा पढ् है । कथाहरु खुब मनपर्छ तलाईं, तर कथाहरु त थुप्रै भेटिएला तर हाम्रो कथा कसैले लेखेका छैनन् रहेछ । त्यसैले लेखें । दुस्साहस गरे । अनि हिम्मत जुटाए ।
मलाई तेरो कपालको सुगन्ध अझै याद आउँछ । खै किन हो, तेरो अंगालो आमाको काखपछीको दोस्रो स्वर्ग लाग्छ । अनि तेरो साथ दुनियाँ जित्न सक्ने तागत लाग्छ ।
याद छ, धरानको बुढासुब्बा मन्दिरका पूजारीके के भनेका थिए ? तैंले त भुलिसकिस होला तर मैले सम्झिरहेछु, यो मन्दिरमा म पुँजारी भएको ८ वर्ष पूरा भयो, आजसम्म कयौं जोडीहरु आए, सबैलाई देखियो, हेरियो । तर तपाईंहरुको यो जोडी । हाय १ कहिल्यै नछुट्नु है । सायद भगवान पनि खुसी होलान्, यो जोडी देखेर ।
अँ, साच्चै । तैंले व्रत बसेर मलाई मागेको भन्या हैन् ? तेरो भगवानले पूकार सुनेनन् कि तैंले अरु कसैलाई मागेको थिइस् ? छ्या हौ । मेरो मन पनि केके सोच्छ, केके । तैंले मबाहेक अरु सोच्ने ? अहँ । हुनै सक्दैन । भ्रम नै सहि, कुनैकुनै भ्रम पनि औधी प्यारा लाग्छन् नि । अझै यसैमा रमाइरहन पाए हुन्थ्यो जस्तो ।
फेरि यो नसोच्नु म उस्तै छु । हैन्, म ‘मुभ अन’ भैसके सानी । तैंले दिएको फर्मुलाले वास्तवमै काम गर्यो । आजभोलि म व्यस्त छु । नाम र दाम कमाउने चक्करमा छु । दुईचार जनाले राम्रै भन्दिन्छन् । पुग्नलाई लगभग धेरै पुगेको छ । खुसी नै छु, आफ्नो जीवन हेरेर । तर यहाँ घरीघरी कोहि कसैको अभाव खड्किन्छ, कोहि नपुगेको भान हुन्छ, सबैथोक पुगेर पनि खल्लो लाग्छ जीवन ।
तँ सोच्न सक्छस्, लेखिसकेको मेसेज मेट्नुपर्दाको पीडा ? तँ सोच्न सक्छस्, एउटै शहरमा हुँदा पनि हेर्न नपाउनुको पीडा ? तँ सोच्न सक्छस्, सपनामा बहकिएर नाम पुर्काउनु पर्दाको पीडा ? तँ सोच्न पनि सक्दैनस् । तर मैले गुजारिसके । र, फेरि पनि भन्छु, कम्तिमा आजभोलि यी कुराले पीडा दिन सक्दैनन् । निकै बहादुर भएको छु नि म ।
तलाईं भेट्न मन लाग्छ । भेटेर भन्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन् । आँखाहरु नथाकुन्जेल हेर्न मन लाग्छ । कस्सेर अंगालो हाल्दै लुटुपुटु गर्न लाग्छ । साला, यो पनि कति बदमाश भएको होला नि ? तँ मेरो साथमा छैन् भन्ने कुरा मान्दै मान्दैन ।
मानोस् पनि कसरी ? अतीतमै सहि, तँ मेरो दिदी होस्, जसले मेरो हरेक काममा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छ, तँ मेरो दाइ होस्, जसले मलाई कसैले घुरेर हेर्दा मात्र जुध्न जान्छ, तँ मेरो आमा होस्, जसले मलाई पीडामा हुँदा ओत लाग्ने अंगालो दिन्छ, तँ मेरो साथी होस्, जसले दुस्ख, सुखमा साथ दिन्छ र तँ मेरो प्रेमिका होस्, मेरो मरुभूमि जस्तो उजाडउजाड जीवनमा हरियो रुख बनेर उभिएको छस् । काश तँ मेरो श्रीमती हुन्थिस् त !
खैर, म फेरि आफ्नै कुरामा बहकिए । तलाईं त थाहा छ नि, मेरा भाइहरु कस्ता छन् भनेर ? अस्ति एकजना भाइले मलाई फोन गर्यो,
भाउजूलाई यहाँ मन्दिर अगाडि एकजना केटाको हात समाउँदै डुल्दै गरेको देखिराछु, त्यसको हात, खुट्टा भाँच्द्मि ?
मैले फोन काटिदिए । हेर त, आज पनि दुनियाँले तलाई मेरो ‘प्रेम’ भनेर बुझ्छ । पुराना चिनजानीहरु भेट्दा पहिला तेरो हालखबर सोध्छन्, अनि मात्र मेरो । अनि यो सबै टुटाएर, फुटाएर के पायौं हामीले ? हामीले केही पाएनौं, सानी । केही नै । तलाईं त्यो जबर्जस्त लादिएको सिन्दुरले लुट्दैछ । अनि मलाई ‘नाम कमाउने’मोहले गलाउँदैछ ।
एउटा मनले सोच्छ, सिन्दुर पो अर्काको हो त । प्रेम अर्काको कहाँ हो र? फेरि सिन्दुर र प्रेम विल्कुल अलग कुरा पनि त हो । सिन्दुर अर्काको लगाउँदैमा आशा मर्ने कुरा हो र ? मान्छेहरु मरेको मान्छेसँग त स्वर्गमा भेट्ने आशा राख्छन् भने म किन आशा मार्नु ? अहँ, कहिल्यै आशा मार्नेछैन् ।
फेरि अर्को मनले सोच्छ, हैन् । अब मैले उसको सिन्दुरमा आँखा लगाउनु हुँदैन । उसको सिन्दुरको अगाडि मैले मेरो प्रेमलाई बलि चडाउनुपर्छ । बस्, यहि भूमरीमा रुमलिरहेछ, जीवन ।
अब म तलाईं किस्ता सुनाउँछु है । मेरो किस्तामा खुब रुचि छ नि है ? तैंले ‘मेरो बेस्ट फ्रेन्ड’भनेर चिनाइदिएको थिइस् नि, अस्मिता । हो, त्यही अस्मिताले एकदिन मलाई सोधेकी थिइ, जि तपाईंहरुको सम्बन्ध सकिएको अरे हो ? हाय ! त्यसलाई कसले भनिदेओस्, शरीरमा लागेको खत होर ? चटक्कै मेटिनलाई । मनको खत हो, कहिल्यै मेटिदैन । फेरि पनि दोहोर्याउछु, जन्म, मृत्यु र प्रेम जीवनमा एकपटक हुन्छ । र, त्यो प्रेम मैले तलाई गरिसके । अब चाहेर, नचाहेर म कसैलाई प्रेम गर्न सक्दिन् ।
हुन त त्यसपछि जीवनमा मान्छेहरू नआएका भने होइनन् । तेरो बेस्ट फ्रेन्ड अस्मिता देखि १८ वर्षीया फुच्चीले समेत ‘कथित प्रेमको साट्न खोजे । मन साट्न खोजे । कतिले त तन पनि साट्न नखोजेका हैनन् । तर कोहिमा पनि मैले तँ भेटिन ।
थाहा छ, आजभोलि मान्छेहरु मसँग निकै नजिकिन खोज्छन् नि । सबैभन्दा रिस उठ्ने वाक्य थियो है, यो ? तेरो शंकामा पनि मिठो माया लुकेको थियो सानी । अहिले सम्झिदा मलाई लाग तेरो शंकामा पनि मिठो माया लुकेको थियो सानी । अहिले सम्झिदा मलाई लाग्छ, सायद तलाईं निकै हतार थियो क्यारे । त्यसैले त होला, हतारहतार मेरो जीवनमा आइस्, हतार गरेरै धेरै माया देखाइस्, अनि जान पनि हतारहतार गरेरै गईस् । अहो ! म पनि कहाँ कहाँ बहकिन्छु हौ ? अघि म के पो भन्दै थिए ? ए... आजभोलि नजिकिन चाहनेहरु कुनै न कुनै स्वार्थले नजिकिन खोजेको मैले प्रष्ट बुझेको छु । तर जतिबेला मेरो जीवन अनेकन कष्ट, पीडा, अभावको बीचमा गुज्रिदैथ्यो । हो, त्यही बेला भेटेको मैले तलाईं । त्यहीँ बेला मलाई साथ दिएको तैंले । म कसरी भुलु यार ?
हो, तँ मबाट टाढिईस् । त्यसपछि अलिकति मेरो मन बहकिएकै हो । अझ भनौं, मैल आफूलाई सम्हाल्न अनेकट हत्कन्डा अपनाएकै हो । त्यसैको फलस्वरूप एकजना आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने केटीमान्छेसँग म नजिकिए । मन बहकाउन नजिकिए भन्दा न्यायोचित होला । अलि समयपछी उनले मलाई मुखै फोरेर भनिन्, जि अब यसरी जीवन चल्दैन । केही सोच्नुस् । मैले कसैलाई प्रेम गरिसकेको र अब कसैलाई प्रेम गर्न नसक्ने बताइदिए । उनले थपिन, तपाईंको जीवनमा त्यो प्रेम बाहेक पनि तपाईंलाई माया गर्ने मान्छे वरिपरि हुन सक्छन् ।
प्रेम जीवनमा एकपटक हुन्छ, त्यो मैले गरिसके । प्लिज ।
तपाईं जत्तिले मान्छेले यस्तो अबैज्ञानिक कुरा गरेको सुहाउँदैन । प्रेम जीवनमा एकपटक हुन्छ भनेर बिज्ञानलाई चुनौती दिने ?
ए सरी । अरुको कुरा गरेको मनपर्दैन पो त है ? अब मेरै कुरा सुनाउँछु । आजभोलि मान्छेहरू प्रेमको कुरा गर्छन् अनि म झट्ट तेरो मुहार सम्झिन्छु । सँगै तैंले भनेको पनि सम्झिन्छु ।
हजुरको अगाडि कसैले प्रेमको कुरा गरे भने हाम्रो प्रेमको उदाहरण दिनु है ।जीवनमा एउटै गुनासो तसँग रहिरहने भयो । तैंले नै सिकाइस प्रेम गर्न, तैंले नै सिकाइस् प्रेमको अर्थ बुझ्न, तैंले नै सिकाइस हास्न, जिउन अनि रमाउन । तर किन सिकाइनस्, तँ बिनाको जीवन कटाउन ?
भनेर कुनै फाइदा छैन,
तर फेरि पनि भन्छु, भनिरहन्छु, जीवनभर भन्छु ।
तँसँग अझैपनी प्रेम छ । रहिरहन्छ ।
उहीँ तेरो आफ्नै केटो,